Isihloko esebiwe | Scrolla Izindaba
Umbhali wesihloko kwe-Daily Voice unecala elibi lokweba izihloko.
Isibhengezo sephepha langoLwesine lomhla ziyi-18 kuNdasa simemezele: “ERECTIONAL SERVICES”.
Indaba ibimayelana nokumiswa kowesifazane osebenza ukugada izibhoshwa ejele ngemuva kokuvela kwevidiyo yocansi ecacile, esabalele ezinkundleni zokuxhumana, yobudlelwano nesiboshwa.
Inkinga kube ukuthi abakwa-Scrolla.Africa bafake udaba lwetheyiphu yocansi ngoLwesibili ebusuku, emahoreni angama-36 ngaphambili.
Isihloko sethu: “Department for Erectional Services.”
Kunesisho esidala esithi ukulingisa kuyindlela yokubamba iqhaza ethambile.
Kodwa sikhathazekile ngombali wezihloko we-Voice okucace bha, ukuthi uhlulekile ukubhekana nenselelo – ukugwema ukungadiyisi kwephepha.